Mandrisika ny mpiserasera ny Fahitalavi-panjakana ao Shina mba handrahona ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitati-baovao ao Hong Kong amin’ny alalan’ny famoahana ny sarin’izy ireo amin’ny tranonkala · Global Voices teny Malagasy
Nandrisika ireo mpanjohy ao amin'ny Weibo ny CCTV “hanala ny sarontava” an'ireo mpanao fihetsiketsehana
Voadika ny 04 Oktobra 2019 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Italiano, русский, English
Pikantsary avy amin'ny tranonkala hkleaks.ru.
Napetraka ny tranonkala hkleaks.ru mba handrahonana ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitati-baovao ao Hong Kong amin'ny alalan'ny famoahana ny mombamomba azy ireo manokana, ka anisan'izany ny sary, ny adiresy onenana, ny daty nahaterahana, ny laharana finday ary ny kaonty media sosialy. Manana mailaka hitaterana manokana momba ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong ihany koa ny tranonkala.
Inona izany hoe doxxing?
Ny Doxxing dia fomba fanao mamoaka ny mombamomba manokan'ny olona tsy nahazoana alalana taminy, ary misy fikasana handrahona na hampitahotra azy. Raha azo idirana mora foana na mora hita ny mombamomba tahaka izany, tahaka ny sary manokan'ny mpiserasera navoaka tao amin'ny media sosialiny na pejy hitan'ny daholobe, ny fikasana amin'ny doxxing kosa dia ny hanorisory na handrahona ilay olona kendrena.
Tamin'ny 18 Septambra, namoaka lahatsary tao amin'ny kaontiny ofisialy Weibo ny Fahitalavi-panjakana Shina (CCTV), lahatsary mandrisika ny hafa hampiasa ny tranonkala mba “hanala ny saro-tavan” ireo “mpirotaka” ao Hong Kong
Noraketina toy ny hkleaks.org manodidina ny faramparan'ny volana Aogositra ny tranonkala “doxing” tany am-boalohany, ary vao haingana no nafindra tamin'ny tolotra fampiantranoana Rosiana noho ny fitarainana momba ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo:
— Selina Cheng ??? (@selina_cheng) September 16, 2019
Ao amin'ny anaran-tsehatra Rosiana no misy ny tranonkala fandrahonana hkleaks.ru, mampiasa ny mailaka (Yandex) & tolotra fiarovana Rosiana amin'ny DDOS (ddos-guard) lahatsoratra misy ny antsipirihany manokana momba ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpikatroka. Vao haingana izy no nampiditra vaovao momba ny mpiasan'ny HK01 sy ny mpiasa hafa ao amin'ny Apple Daily sy ny fanoratana.
Hatreto dia namoaka tahiry manokan'ny olona miisa 90 ny tranonkala. Mpanao lalàna mpomba ny demaokrasia, mpianatra mpikatroka ary mpanao gazety avy ao amin'ny Apple Daily sy ny Stand News no ankamaroan'ireo lasibatra. Antsoin'ny tranonkala hoe ”mpanao fitokonana mpomba ny fahaleovantenan'i Hong Kong izy ireo.
Mandrisika ny hafa ihany koa ny tranonkala mba hametraka ny (horirantava) mombamomba manokan'ny mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong ao amin'ny mpitantana ny tranonkala amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka Rosiana.
Tsy ara-dalàna ny mamoaka tahiry manokana raha araka ny lalàna mifehy ny fiainana manokana ao an-toerana. Noho izany dia afaka mametraka fitoriana noho ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana any amin'ny rejistry ny anaran-tsehatra Rosiana sy ny orinasa mpampiantrano ny Kaomisera misahana ny tsiambaratelo ao Hong Kong satria ivelan'ny faritry ny fahefana i Rosia.
Mandritra izany fotoana izany, niely tamin'ny fomba ara-teknika tamin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy Shinoa ao amin'ny tanibe ny antsipiriany amin'ilay tranonkala. Ahitana votoaty avy amin'ny tranonkala “doxing” ny horonantsary navoakan'ny CCTV tantanin'ny fanjakana ao amin'ny Weibo ary nandrisika ny mpiserasera Shinoa mba “handray anjara”:
[Zarao ity! Topazo maso ireto ratsy tarehy ireto! Esory ny saro-tavan'ireo mpanakorontana any Hong Kong] Vao haingana ny sasany amin'ireo mpiserasera no namorona tranonkala “HKleaks” izay manana ny lisitr'ireo mpanakorontana sy mpomba ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Misy sokajy telo ilay tranonkala: “mpitati-baovao avy amin'ny paoma misy poizina”, “mpanakorontana mpomba ny fahaleovantenan'i Hong Kong”, “mpamafy korontana ao Hong Kong”. Ahitana tondro solon'anarana ihany koa izany mba hanampiana ny mpijery hijery akaiky an'ireo tarehy ratsy ireo. Esory ny sarontavan'izy ireo ary andao hanao zavatra. Zarao ity! (amin'ny alàlan'ny fantsona WeChat: Hearsay avy ao Causeway Bay)
Navoakan'ny fampahalalambaovao eo an-toerana, sampan'ny Ligin'ny Tanora Komonista Shinoa, kaonty weibo an'ny polisy eo an-toerana sy ny maro hafa ny lahatsary. Avy eo tonga tany Hong Kong tamin'ny alàlan'ny WeChat sy Weibo ary naparitaka tamin'ny fampiharana media sosialy hafa toa ny WhatsApp.
Betsaka ny naminavina fa manana anjara andraikitra amin'ny fandrahonana mpanao fihetsiketsehana i Beijing. Nanazava tamin'ny mpanolotsainan'ny distrika mpomba ny demaokrasia, Chiu Chu Bong, ny iray tamin'ireo lasibatra mikasika ny antony ninoany fa nandray anjara tamin'ny fandrahonana ireo manampahefana mpitandro filaminana Shinoa:
Nilaza tamiko ny mpanao fihetsiketsehana milamina iray fa olom-pirenena tsotra fotsiny izy izay nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana. Mpiasa birao no asany saingy nolazaina fa “milisy mpanao fihetsiketsehana” izay nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana tsy ara-dalàna isan-karazany izy. Navoakan'ny tranonkala ny anarany feno, ny daty nahaterahany, ny kaontiny facebook sy ny adiresiny. Notanan'ny polisy Shinoa tanibe nandritra ny 5 ora izy roa volana lasa izay ary nojeren'izy ireo ny sariny tao amin'ny findainy, niampanga azy ho nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana tsy ara-dalàna. Narakitry ny polisy tamin'ny USB ny vaovao tao amin'ny findainy.
Niaro tena izy fa manana fahazoan-dàlana avy amin'ny polisy ny fihetsiketsehana rehetra. Nangataka azy mba hameno fanambarana ny polisy ary nanao fanahy iniana nanoratra adiresy diso tao amin'ilay antontan-taratasy izy. Nipoitra tamin'ny tranonkala ilay adiresy diso. Noho izany dia azony antoka 100% fa avy any amin'ny manampahefana polisy no nivoahan'izany..
Nilaza tamin'ny Apple Daily ny lasibatra iray hafa fa sary nampiasainy tamin'ny karatra fivezivezena ao Shina ny sariny tao amin'ny tranonkala. Noho izany, dia niahiahy izy fa ny China Travel Service (Hong Kong) Limited miaraka amin'ny fitondrana Shinoa no anisan'ny loharano nivoahan'ny sary. Nilaza ny loharanom-baovao hafa fa navoaka tao amin'ilay tranonkala ihany koa ny adiresy sy ny laharana finday nampiasainy ho an'ny China Travel Visa.
Na dia ampiasain'ny mpanao fihetsiketsehana sasany any Hong Kong aza ny fandrahonana mba hamoahana vaovao momba ireo vahoaka mpomba an'i Beijing izay nanafika mpanao fihetsiketsehana sy polisy manamboninahitra nampiasa hery tafahoatra nandritra ny fisamborana, matetika esorina haingana ao amin'ny sehatra lehibe ireo fampahalalana mifandraika amin'izany satria manohitra ny lalàna eo an-toerana mifehy ny fiainana manokana. Amin'ny lafiny iray, dia mety hiteraka fanagadrana faobe ara-politika ny fandrahonana mpanao fihetsiketsehana sy mpanao gazety amorain'ny fampahalalam-baovao tantanin'ny fanjakana ao Shina sy ny fampahalalam-baovao mifandraika amin'ny antoko.
Namoaka fanambarana ny fikambanan'ny mpanao gazety ao Hong Kong, milaza ny ahiahy momba ny fiarovana manokana ny ain'ireo olona rahonana.
Mandritra izany fotoana izany, nametraka fitarainana tany amin'ny orinasa mampiantrano ny tranonkala ireo mpikatroka aterineto, mitaky ny fanesorana ny tranonkala fandrahonana.
Nivoatra ho fihetsiketsehana mpomba ny demaokrasia hahazoana governemanta manao tamberin'andraikitra ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana hatramin'ny volana jona tany Hong Kong. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fihetsiketsehana amin'ny fitsidihana ny pejy manokana.